मप विश्वविद्यालयमा दुई थरी नारा - Paschimnepal.com
मप विश्वविद्यालयमा दुई थरी नारा
सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय राजनीतिक आन्दोलनले थलिएको छ । एक महिनादेखी विश्वविद्यालयमा नेविसंघ समद्ध विद्यार्थीले लगाएको ताला खुल्न नपाउँदै रजिष्ट्रारको पक्षमा पुनः आन्दोलन चर्काइएको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपछि प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई निलम्वन गर्न सिफारिस गरेपछि नेपाल विद्यार्थी यूनियनले आन्दोलन चर्काएका छन् । उपकुलपति र मल्लविच मनमुटाव भएपछि रजिष्ट्रार मल्ललाई कुलपतिमार्फत निलम्वन गरिएको थियो ।
आईतबार नेपाल विद्यार्थी युनियनले विश्वविद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पार्दै आन्दोलनको शुरुवात गरेका छन् । तर त्यसको विरोधमा नेकपा सम्वद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले पठन पाठनकाे सञ्चालनकाे माग राख्दै विरोध जनाएका छन् । नेविसंघले आईतबार विश्वविद्यालयको मुख्य गेट र कार्यालयहरुमा तालावन्दी गरेका छन् ।
उपकुलपति कोइरालाले मनलाग्दी रुपमा निर्णय गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको नेपाल विद्यार्थी युनियन मप विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग संकायका सभापति राजन केसीको आरोप छ । उनले नेकपाको बहुमत दम्भले रजिष्ट्रारलाई निलम्वन गरेको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको समेत बताए । ‘दुई महिनादेखी हामी आन्दोलनमा उत्रेका हौं’ केसीले भने, ‘रजिष्ट्रारको उपस्थितिमै नियुक्ती गर्नुपर्नेमा उपकुलपतिले एकलौटी कार्यकर्तालाई नियुक्ती दिँदा विरोध शुरु गरेका हौं ।’
विश्वविद्यालयको रातो कितावअनुसार नियुक्ती नभएको ठहर केसीको छ । केही दिन अघि मात्रै रजिष्ट्रार मल्ललाई निलम्बन गर्नु गलत भएको भन्दै पुनर्वहालीको मागको नेविसंघको रहेको उनको भनाई छ । अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, स्वतन्त्र र नेविसंघ समेतले पठन पाठन शुरु गर्नुपर्ने भन्दै नाराजुलुस गरेको अनेरास्ववियुका नेता निकुञ्ज पाण्डेले जानकारी दिए ।
‘माग र विज्ञप्तीविना विश्वविद्यालयको पठन पाठन रोक्नु गलत हो’ पाण्डेले भने, ‘खाली गुण्डागर्दि शैलीमा पठन पाठन बन्द गर्न आन्दोलन थालेपछि त्यसको विरुद्दमा हामी लागेका छौं ।’
मंसिर २० गते रजिष्ट्रार मल्ललाई निलम्बित गरि सहप्राध्यापक यामबहादुर कार्कीलाई रजिष्ट्रार नियुक्त गरिएको थियो । रजिष्ट्रारले पदीय आचरण अनुरुपको व्यवहार नगरेको भन्दै विश्वविद्यालय सभाका एक चौथाई सदस्यले गत बिहिबार कुलपति समक्ष निवेदन दिएका थिए । मल्ल हाल छानविनको प्रक्रियामा छन् ।
यता, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्कीलाई आईतबार दिउसो १ः३० बजे विस्तारित कार्यालयमा सपथ खुवाइदैछ ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, मंसिर २३, २०७५ 1:00:14 PM
Prevप्रगतिशिल ईन्जिनियरिङ्ग एजेण्डा घोषणा
Nextमप विश्वविद्यालयमा लागेको ताला फोडियो